( Fadlan uga dayo wixii wanaag ah xumaantana halkeeda uga tag ). | Explorations in History and Society
( Fadlan uga dayo wixii wanaag ah xumaantana halkeeda uga tag ).
Kacaankii 4aad:- (1969 – 1990) Waxaa hoggaan u ahaa, Sarreeye Gaas: Maxamed Siyaad Barre iyo saraakiil gadoodsan oo af genbi ku ridday xukuumaddii rayidka aheyd ee markaa talada dalka heysay, waxaana caleemo qoyan ku soo dhoweeyay dad weynihii soomaaliyeed ee indhaha ku wada hayay kacdoonnadii milleteri ee qaaradda afrika inteeda badan wada saameeyay.
Su’aashu waxey tahay ( maxey dhiseen maxeyse dhibeen? ).
Waxey si hufan u adkeeyeen amaankii iyo kala danbeyntii dalka.
Waxey dhiseen isbitaalladii, iskoolladii iyo warshadihii dalka.
Waxaa lagu amaanaa oo xusuus mudan qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii horumarineed, sida Ololihii horumarinta reer miyiga, bacaad celintii shalaambood, ololihii raridda iyo dejinta iyo ololayaashii iskaa wax u qabso iyo fatahaaddii biyaha iyo sidoo kale kicintii iyo abaabulkii bulshada ee ku saleysnaa xag dhaqan iyo xag isboorti siyaasadi ay ku milneyd, sidaa darteed soomaaliya gudaha iyo dibaddaba xiddig nuuraya ayey ka aheyd magaceeduna waa sarreeyay.
Dunidu waa lammaane wax qabadkoodii quruxda badnaa ee ay indhuhu ka marqaati kacayeen aragnaye maxey xumeeyeen?.
Su’aashani jawaab gaaban waxaa inaga siinaya suugaan yahan af maal ah oo aad shirb kiisa ka garan kartaan tabashada wixii dhacay, wuxuuna farriin tiisa ku soo koobayaa laba sadar oo ah:-
Jidya jardiino waa dhiseen
Jadiin keyse naga jareen.
Waan filayaa inaad jawaabtaasi uga qanacdeen wax badan oo qoraal lagu sheegi lahaa, ha yeeshee gubaabadeyda wanaagga lehna waxaan ku soo af xirayaa :-
Hadaan si kale u sharxo : Hal Sabab Oo Ka Mid Ah 1000-Kii Sababood Oo Lagu Hal Sabab Oo Ka Mid Ah 1000-Kii Sababood Oo Lagu Riday Rajiimkii Siyaad Barre! Rajiimkii Siyaad Barre!
Monday 21 Oktoobar 2013 – Aqriste Moment Media Ethics Online ayaa kusoo gudbineysa, Hal sabab oo ka mid ah 1000kii Sababood oo lagu Riday Rajiimkii Siyaad Barre. Xogtaan ayaadaa kaligeed is fasireysa oo ma ahan mid u baahan Faallo.
Shalay, Dalka Soomaaliya sidaan iyo ka daran buu soo maray ee bal Fikrigiina ka dhiibta Hoos. Xogtaan ayaadaa kaligeed is fasireysa oo ma ahan mid u baahan Faallo.
Muscat (Oman) Mahamed Suban Nur (Gadabursi – Dir)
Tripoli (Libya) Abdirahman Osman Said (Geellle) (Gaadsan – Dir)
Dir & Isaaq 5 – 10
Digil & Mirifle 1 – 3
Beesha 5aad 4 – 3
La politica migratoria repressiva dell’Unione Europea ha un costo umano troppo elevato Lerner l’intoccabile, basta con gli attacchi a Primo Levi